Hlola Indawo Yothando & Idolobha Elidala kusuka ku-Condo Yesimanje - I-Airbnb
Hlola Indawo Yothando & Idolobha Elidala kusuka ku-Condo Yesimanje
Thatha ingubo emhlophe egqwalile bese uya ophahleni, lapho indawo yokubhukuda yomphakathi engenamkhawulo, i-Jacuzzi, izindawo zokuphumula, nokubukwa kwedolobha elisenkabazwe kulindile e-V399. Lapho ilanga selishonile, ifulethi libonisa imfudumalo, linemibala ecebile ye-mahogany, imipheme enamatye, nendawo yaphansi enamatshe.
Ngemva kokuphuma ebusuku edolobheni, ukulala e- kwamukelekile, i-condo inemipheme emnyama enezimoto.
“I-V399 itholakala ngezinyathelo ukusuka kwengcono kakhulu i-Romantic Zone okufanele inikezwe, nokho iqhelelene nomsindo.”
– Jeff, umbungazi wakho
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, Umatilasi oyi-Pillow-top, Umbhede omkhulu, Umshini wokuphephetha esophahleni, Umshini womoya oqandisayo
4.83 (izibuyekezo ezingu-69)
Ngokugxila okuphezulu kwezindawo zokudlela namabha edolobheni, le ngxenye yomlando yedolobha idumile kubavakashi nabantu bendawo. Ama-Condos namahhotela e-boutique avame kakhulu kunezindawo zokungcebeleka, okuyindlela le ndawo egcine ngayo ukunambitheka kwayo kwase-Mexico.